Posted by See N B Seen | Permalink |5comments
ဒီနေ့ အမေ့အသက် (၆၀) ပြည့်သည်။ အသည်းရောဂါ၊ သွေးအားကျရောဂါတွေ အမေခံစားနေရပြီ။ တရားဘာဝနာ အားထုက်လို့ စိတ်ရောလူရော အမေ အေးချမ်းစွာနေတတ်ပြီ။ ဒီနေ့ အမေ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ အလှူဒါနတွေ ကိုယ်တိုင်စိတ်တိုင်းကျ သွားလုပ်နေနိုင်တဲ့အတွက် ကံကြမ္မာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တရားရှိတဲ့အမေဖြစ်လုိ့ အနေတတ်ခဲ့သလို အသေမြတ်ဘို့ ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်။ တရားမရှိတဲ့ ကိုယ်ကတော့ အမေမရှိရင်ဆိုတာ မတွေးကြည့်ချင်ပါဘူး။ ကိုယ်တို့မိသားစုအတွက် အမေရှိနေခြင်းဆိုတာ ငြိမ်းချမ်းရေးသံတမန်ရှိနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဖေနဲ့သားတွေရဲ့ ပြဿနာကို အမေတစ်ဦးတည်းသာ ဖြေရှင်းနိုင်တယ်လေ။ သားတွေနားလည်အောင် အမေပဲ ပြောပြတတ်သလို၊ အဖေ့ကိုလည်း အမေပဲ နားချတတ်တယ်။ မိသားစုကို ပျော်ရွှင်အောင်ထားခဲ့တဲ့အမေ... အမေ့ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး ပျော်ရွှင်ခဲ့ပါရဲ့လား။
ကိုယ်တို့အဘွား (အမေ့အမေ) ဆုံးတော့ အမေ့အသက်က ၅၀။ အဘွားရဲ့ အလောင်းကို အမေပဲ ရေချိုးပေး၊ အ၀တ်အစားလဲပေး။ နယ်မှာ ဆုံးတာဆိုတော့ ရေခဲတိုက်လဲပို့စရာမလို၊ အိမ်မှာပဲ ပြင်ထားပြီး နောက်နေ့သွားချလိုက်ရော။ အဘွားအလောင်းလဲ ပြင်ပြီးရော အမေက အိမ်အောက်ဆင်းပြီး မြို့က၀ယ်လာခဲ့တဲ့ လုံချည်တွေ၊ ပုဆိုးတွေ ရပ်ကွက်ထဲက နွမ်းပါးတဲ့ လူတွေ တစ်ယောက်တစ်မျိုး ကြိုက်တာလာယူ လှူပါလေရော။
မြစ်ကမ်းဆိပ်က မြို့ငယ်လေးလဲဖြစ်၊ နွမ်းပါးသူများတဲ့နေရာမျိုးလဲဖြစ်ဆိုတော့၊ အမေ့ အိမ်အောက်မှာ လူတွေအများကြီး အော်ကြ၊ ဟစ်ကြ၊ နှုတ်ဆက်ကြ၊ ထမိန်အဆင်တွေရွေးကြ၊ ပျော်ကြ၊ ရွှင်ကြနဲ့ ပူပူနွေးနွေး အသုဘအိမ်ကနေ သမ၀ါယမဆိုင် ပစ္စည်းတွေဝေသလို ဖြစ်ခဲ့လို့ ရပ်ကွက်ထဲက တချို့လူတွေက အမေ့ကို ကဲ့ရဲ့ကြဘူးတယ်။ အမေကတော့ ပြုံးပြုံးပဲ။ သေမှငိုနေလို့ ဘာလုပ်မလဲ။ မသေခင် စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားရမယ်။ အဘွားဖြစ်ချင်တာ၊ ဘုရားတည်၊ ကျောင်းဆောက်၊ ဘုရားပြင် အကုန်လုံး အမေကလုပ်ပေးခဲ့တာ။ အဘွားမဆုံးခင် အချိန်အထိ လိုလေသေးမရှိထားခဲ့ပြီးပြီ။ အဘွားစိတ်ဆင်းရဲအောင်လည်း ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ဘူး။ ဆုံးပါးသွားတော့လဲ အမေ့လက်ထဲမှာ။ အမေ့မှာ အဘွားအတွက် မျက်ရည်ကျအော်ဟစ် ငိုစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့။
ဒီနေ့တော့ အမေ့အသက်က (၆၀)။ ကိုယ့်အသက်က (၃၀) ကျော်၊ အမေ့လို လိပ်ပြာမသန့်သေး။ ထူးထူးခြားခြား မွေးနေ့မို့ အဖေက သူ့မိန်းမကို အသက်နဲ့ အညီ မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် သူ့အနုပညာနဲ့ စုဆောင်းထားတဲ့ သိန်း(၆၀) ပေးတယ်တဲ့။ ကိုယ်တို့သုံးယောက်ကတော့ အဖေပေးတာနဲ့ သားတွေပေးတာ အတူတူလို ဘာလိုလိုနဲ့ ရောချလိုက်ရော။ အမေ့ကို ဘာလိုချင်လဲလို့ ၀ိုင်းမေးတော့ အမြဲပိုက်ဆံပြတ်နေတဲ့ ကိုယ့်ကို ပိုက်ဆံလေးဘာလေး စုဆောင်းတာမြင်ချင်တယ်တဲ့။ အကို့ကိုတော့ အဖေနဲ့ တည့်အောင်ပေါင်းတဲ့။ သားအငယ်ကိုတော့ အဘွားကြီး၊ အဘိုးကြီးတွေ ပိုက်ဆံတောင်းနေတဲ့ ဘုရားစောင်းတန်းတွေမှာ အလှူသွားလုပ်ချင်လို့ လိုက်ပို့ခိုင်းပြီး တွေ့သမျှ အဘိုး၊ အဘွားတွေကို တစ်ယောက် တစ်ထောင် လှူခဲ့တယ်။ အမေလိုချင်တဲ့ လက်ဆောင်တွေကလဲ နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ်တို့ဘ၀တွေအတွက်ချည်း ဖြစ်သွားတာပါပဲ။
လွယ်ကူစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ။ ။
ကိုယ်ကိုတိုင်လဲ မိသားစုနဲ့ အမြန်ဆုံး ပြန်နေခွင့်ရပါစေ။
Posted by See N B Seen | Permalink | 10 comments
ပဒုမုတ္တရမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်၌ ခရီးသွားယောက်ျားတစ်ယောက်သည် အမိုးအကာမရှိသဖြင့် နေပူလျက်ရှိသော ဆင်းတုတော်တစ်ဆူ တွေ့သည်နှင့် မိမိစီးလာသောဖိနပ်ကိုချွတ်၍ ဆင်းတုတော်၏ ဦးခေါင်းထက်တွင် တင်ထားခဲ့၏။ များမကြာမီ အခြားခရီးသည် ယောက်ျားတစ်ယောက်ရောက်လာ၍ အမြင်မတော်အလုပ်ကို လုပ်ရက်လေခြင်းဟု ရေရွတ်ကာ ဖိနပ်ကိုလှမ်းယူကာ လွှင့်ပစ်ခဲ့သည်။ ထိုအပြုအမူအတွက် ကြောင့် ၎င်းခရီးသည်အသီးသီးမှာ မည်ကဲ့သို့ အကျိုးပေးသည် ထင်ကြသနည်း။
ဖိနပ်ကို ဆင်းတုတော်မှ ကောက်ယူလွှင့်ပစ်သော ခရီးသည်သာလျှင် ကောင်းကျိုးပေး၍၊ ဆင်းတုတော်၏ ဦးခေါင်းထက်ဝယ် ဖိနပ်မိုးတင်ထားခဲ့သော ခရီးသည်မှာ အ၀ီစိသို့ ကျသည်ထင်ကြသလော။ မဟုတ်ချေ။ ဤသူနှစ်ဦးစလုံးမှာ သေလွန်သောအခါ တာဝတိသာ နတ်ပြည်သို့ရောက်ကြသည်ဟု ကျမ်းအဆိုရှိလေသည်။ ဆင်းတုတော်၏ ဦးခေါင်းထက်ဝယ် ဖိနပ်မိုးတင်ခဲ့ခြင်းတည်းဟူသော အပြုအမူသည် အခြားသူများ၏ မျက်စိ၌ အမြင်မတော်ဟု ဆိုကြမည်ဖြစ်သော်လည်း ထိုသူ၏စေတနာမူကား နှယ်နှယ်မဟုတ်ပေ။ ဆင်းတုတော်၏ မျက်နှာ၌ နေပူခြင်းကို မကြည့်ရက်သည်နှင့် ဖိနပ်ကိုချွတ်တင်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင်ခြေပူခံ၍ လမ်းလျှောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်။ ဤစာကိုတွေ့ရပြီးသည့်အချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်အဖို့မှာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ အပြုအမူနှင့် ပတ်သက်၍ အဆောတလျင် ဆုံးဖြတ်ချက် မပေးဝံ့တော့ဘဲ အကြင်သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်စေတနာကို နားလည်အောင် စူးစမ်းဆင်ခြင်သော အလေ့အထ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။
(ဆရာကြီး ရွှေဥဒေါင်း ၏ ဗုဒ္ဗ၀ါဒနှင့် အယူအဆရေးရာများ စာအုပ်မှ နှစ်သက်၍ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
Posted by See N B Seen | Permalink |3comments
အမေ့လို အ ချင်တယ်
ကိုယ်ငယ်ငယ်ကတည်းက အဖေက ကိုယ့်ရဲ့ "Hero" ပါ။ အဖေဘာလုပ်လုပ် "မှန်တယ်ကွာ၊ မိုက်တယ်ကွာ" လို့ထင်မိတယ်။ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို အဖေက ဒေါသတကြီး တုံ့ပြန်တဲ့အခါ၊ စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုး အော်ဟစ် ပြောဆိုတဲ့အခါ အဖေက မဟုတ်မခံနဲ့ သတ္တိရှိတယ်လို့ပဲ မြင်တယ်။ ပြဿနာကို အေးအေးချမ်းချမ်း ခေါင်းအေးအေးနဲ့ သည်းခံပြီး ဖြေရှင်းတဲ့ အမေ့ကိုတော့ အဖေ့စကားအတိုင်း "အမေက သိပ် "အ" တာပဲ" လို့ထင်ခဲ့မိတယ်။ အဖေ့ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု ဘယ်လောက်ကြီးမားခဲ့သလဲဆိုရင် အဖေသာ သေဆုံးသွားခဲ့ရင် ငါတော့လိုက်သေမှ ဖြစ်မယ်။ အဖေမရှိဘဲ အမေနဲ့သာ ဒီလောကကြီးထဲနေရရင် ကြောက်စရာကြီးလို့ စဉ်းစားမိတဲ့အထိပါဘဲ။ အိမ်ကိုလာတဲ့ ဧည့်သည်တွေ၊ ဆွေမျိုးတွေက အဖေနဲ့ချွတ်စွတ်ပဲနော်၊ သူ့အဖေ ကိုယ်ပွားလေးပဲ လို့ ပြောရင် သဘောကို ကျလို့။ အမေတူပဲလို့ ပြောရင် သိပ်မကြိုက်ချင်ဘူး။ ကလေးအတွေးနဲ့တော့ စိတ်မြန်လက်မြန်ရှိတဲ့ အဖေ၊ ဘာလုပ်လုပ်အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ အဖေ၊ အရာရာကို ထိပ်ဆုံးမှ အကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်တဲ့ အဖေရဲ့ စိတ်ကို သူရဲကောင်းကြီးပေါ့။ အဲဒီ သူရဲကောင်းကြီးနောက်က မှောက်လျက်မလဲအောင်၊ မပြိုလဲအောင် တည့်မတ်နေတဲ့ အမေရဲ့ အင်အားကိုတော့ ပျော့ညံ့တဲ့လူ၊ အရာရာကို သည်းခံတဲ့လူ၊ လူတိုင်းကို နားလည်အောင်ကြိုးစာနေတဲ့လူ ဆိုပြီး ပျော့ပျောင်းမှုရဲ့ အင်အားကို လုံးဝအထင်မကြီးခဲ့မိဘူး။ အမေကတော့ ဘယ်သူဘာပြောပြောပြုံးနေတာပဲ။ မခံစားတတ်ဘူးလား မသိဘူးနော်လို့ သားအဖနှစ်ယောက်ပြောရင်း အဖေ့ခြေရာနင်းဘို့ပဲ ကြိုးစားခဲ့မိတယ်။ အမေ့ကို ချစ်ပေမယ့် Hero မဖြစ်ခဲ့ဘူး ဆိုပါတော့လေ။
ကိုယ့်အမေက စကားတွေ အများကြီး မပြောပါဘူး။ အေးအေးချမ်းချမ်း လေးပဲနေတယ်။ စိတ်ဆိုး၊ စိတ်တိုနေတယ်လို့ မရှိဘူး။ မတည့်တဲ့လူ၊ ကြည့်မရဖြစ်တဲ့လူဆိုတာ မရှိဘူး။ ဘယ်လိုမှ ပေါင်းသင်းလို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ လူကျတော့ အမေက ဘာပြောပြော ခပ်မဆိတ်နေလိုက်ရော။ ပြဿနာ ဆိုတာ မရှိသလောက်ရှားတာ။
အမေ့စကားနဲ့ပြောရရင် လူတိုင်း အားနည်းချက် ကိုယ်စီ ရှိတယ်။ ဘယ်နေရာမှာ အားနည်းသလဲ၊ ဘယ်အကွက်မှာ ရူးနေလဲဆိုတာ သိအောင် ကြိုးစားပြီးရင် ဘာလို့ စိတ်တို ဒေါသ ထွက်နေဦးမလဲ။ အားလုံးကိုသိနေတဲ့လူက စိတ်ကို အညစ်ထေး မခံတော့ဘူးတဲ့။ ကိုယ့်အဖေကတော့ ပြောင်းပြန်။ အမြဲတမ်းတက်ကြွ၊ စိတ်ကလဲမြန်၊ စကားလေးတစ်လုံးတောင် အကြောမခံနိုင်လို့ အမေက စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ကပ်ရှုပ်တတ်လို့ တစ်လုံးရှုပ်မျိုးတဲ့။ အစွန်းရောက်လိုက်တာကလည်း တည့်ချင်တဲ့လူဆို တလောကလုံး မကောင်းပါဘူးပြောလဲ သူတည့်တယ်။ အမြင်ကတ်တဲ့ လူကျတော့ တစ်ဖက်လူက ဘာမှ မလုပ်ရပါဘဲနဲ့ ကြည့်လို့မရဖြစ်နေတတ်တာ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အထင်ကြီးလိုက်တာကလဲ သူ့အထက် ဌက် နဲ့ လေယာဉ်ပျံပဲ ရှိတော့တဲ့ အတိုင်း။ ယုတ်စွအဆုံး သူ့ကို လာနှိပ်တဲ့ အနှိပ်သည်ဖိုးတုတ် ဆိုတာတောင် သူအမြင်ကတ်တဲ့ လူကိုမနှိပ်ရ။ သူ့ကိုလာနှိပ်ရင် ၂ ယောက်စာပေးလိုက်တာမျိုး။ အမေကတော့ ပြုံးပြီး အရူးက ရင့်နေပြီတဲ့။ ကိုယ်ကတော့ အစွန်းရောက်တဲ့ စိတ်တွေကို ချစ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောရမယ်။ အစွန်းရောက်မှုကို ထက်မြက်မှုတစ်မျိုးပဲဆိုပြီး ကိုယ့်ရဲ့အဖေနဲ့တူတဲ့ စိတ်တွေအားလုံးကို အမြဲရွှေချခဲ့တာပေါ့။
မိသားစုအားလုံးစုံလို့ အေးအေးဆေးဆေးထိုင်ပြီး စကားတွေ ပြောကြပြီးဆိုရင် ကိုယ်က အမြဲအဖေ့ဘက်က။ ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်က အမေ့သားတွေ။ မိသားစုစကားဝိုင်းတွေမှာ အဖေက စကားကို အမေ့အပေါ် အမြဲတမ်း အနိုင်ယူပြီး ပြောတတ်သလောက်၊ အမေကတော့ ကျိုးကြောင်း ဆင်ခြင်ပြီး ပြောတတ်တယ်။ တခါတလေ ၀ိပဿနာ တရားသက်သက် ကို အေးအေးချမ်းချမ်း အားထုတ်ခွင့်ရှိတဲ့ မယ်သီလရှင် ကျောင်းလေးဆောက်ပြီး လှူချင်လိုက်တာလို့ ပြောရင် အမေ့သားနှစ်ယောက်က သူတို့ပိုက်ဆံရှိရင် အမေ ဖြစ်ချင်တာလုပ်ပေးမယ်ပေါ့။ ကိုယ့်အမေက သီလရှင်တွေ ထမင်းဟင်းချက်ရ၊ ဘုန်းကြီးဆွမ်းကပ်ရနဲ့ လူမိန်းမတွေ အိမ်မှုကိစ္စတွေနဲ့ ရှုပ်နေသလို သာသနာ့ သမီးတော်တွေ အဲလို အရှုပ်တွေ မလုပ်ရတဲ့ အေးအေးချမ်းချမ်း တရားအားထုတ်ခွင့်ရတဲ့ကျောင်းလေးမျိုး ရှိစေချင်တာ။ အဲဒါကို နားထောင်ပြီးတာနဲ့ အဖေကတော့ "ကုန်ရှုံးကြွေးတင်၊ လိုလင်မရ၊ မယ်သီလ တဲ့ကွ။ မင်းက ကုန်လည်းမရှုံး၊ ကြွေးလည်းမတင် တော့ နောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့တဲ့" အဲလို ပစ်ပစ်ခါခါ ပြောတာပါ။ (ကျေးဇူးပြု၍ ဘာသာရေး အရ ၀င်ရောက် ဝေဖန်ခြင်း သည်းခံပါ)။ အမေကတော့ အပြုံးမပျက်ပါဘူး။ အမေစိတ်မဆိုးဘူးလားဆိုတော့ သူ့အကြောင်းသိနေတာပဲ။ အမေ့ Idea လေးတွေဆို အဲလို ပြောလိုက်ရမှ၊ ပြီးတော့ တကယ်လုပ်ချင်ရင်လဲ လုပ်ပေးတာပဲ။ ပြိုင်ပြီးပြောမနေတော့ဘူးလေ။ "၀စီဗေဒ ထွက်တိုင်းရှ" တဲ့ အဖေကြီးရေလို့ပဲ ပြုံးပြီးပြောတာ။ ကိုယ့်အဖေကတော့ အမေဘာပြောပြော သူ့အတွေးပဲ မှန်တယ်လို့ ယူဆလေ့ရှိတယ်။ ဘုရား တရား အရမ်းကြည်ညိုတဲ့ အမေ့ကို အဖေက အတ္တသိပ်ကြီးတယ်တဲ့။ သူစိတ်ချမ်းသာဘို့ပဲ အမြဲ တည်ဆောက်နေတဲ့သူ လို့ အမြဲစွပ်စွဲလေ့ရှိတယ်။ မိသားစုပြဿနာလေးတွေဖြစ်ရင် အဖေက အရမ်းစိတ်ပူ၊ အရမ်းဒေါသထွက်၊ အရမ်းပျာလောင်ခတ် နေသလောက် အမေကတော့ ဘာလုပ်လိုက် ဆိုတာပြောပြီးရင် ဘာမှ မဖြစ်တဲ့ အတိုင်းပါပဲ။
ပြဿနာတိုင်းကတော့ အချိန်တန်ရင် ပြီးသွားတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အဖေဖြေရှင်းတဲ့နည်းနဲ့ဆို ဒေါသထွက်တာရယ်၊ အသုံးမကျတာရယ်က အရင်လာတာ။ ဆူပူတာကအရင်။ ပြဿနာဖြေရှင်းတာထက် တအိမ်လုံးလဲပူလောင်၊ စကားလုံးတွေ ထိန်းမရ၊ ခံရတဲ့သူတွေက ပြဿနာပြီးလို့ အနည်ထိုင်တဲ့အထိ အပြောခံရတာကိုနာကျင်နေတုန်း။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မိသားစုဝင်တွေဆိုတာ မေ့လျော့တဲ့အထိဖြစ်ကုန်ကြ။ ကိုယ့်အမေဆုံးဖြတ်လိုက်ရင် ဘာဒေါသမှ မပါဘူး။ ဘယ်သူမှလည်း စိတ်မညစ်ရဘူး။ ပြဿနာကို အေးအေးချမ်းချမ်းဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းနိုင်ကြတယ်။ အမေကစိတ်မတိုတတ်တော့ အားလုံးက ရင်ထဲရှိတာတွေလည်း အကုန်ပြောထွက်တယ်။ အားလုံးရဲ့ အမှန်တရားကို အမေက မြင်ရတယ်။ အဖေကတော့ နဲနဲပြောလိုက်ရုံနဲ့ "အဲဒါမင်းအသုံးမကျတာပေါ့ကွ" ဆိုပြီး မျက်နှာကလည်း နီလာတာနဲ့ အမှန်အတိုင်းပြောဘို့ တွန့်ဆုတ်၊ ဟိုချန်ဒီချန်ပြောရာက ပြဿနာက ပိုကြီး။ အမှန်တရားလဲပျောက်၊ လုပ်သင့်တာကိုလည်း နောက်ဆုံးမှ ရှာတွေ့တော့တယ်။
ကိုယ်ကိုတိုင်လည်း အဖေနဲ့တူတော့ သွေးဆူလွယ်တယ်။ နည်းနည်းလေးအပြောခံရရင် အများကြီး ဒေါသထွက်၊ နာကျင်တတ်တယ်။ ပြောတဲ့သူ၊ လုပ်တဲ့သူက ပြောပြီးလို့ သူလုပ်ချင်တာလုပ်နေတဲ့အထိ ကိုယ့်မှာ ခံစားလို့ မပြီးသေးဘူး။ စိတ်မထားတတ်တော့ တွေးတွေးပြီး ပူလောင်နေလိုက်တာ။ ရင်ထဲမှာ တနုံနုံ။ အမေကတော့ မလိုအပ်တာတွေ ရင်ထဲထည့်တာလောက် ညံ့တာမရှိဘူးတဲ့။ ကိုယ်ကလည်း အဖေအတိုင်း "မေမေတို့သာ ဘာမှမဖြစ်သလို သူများပြောသမျှ ခံနေတာ ကျွန်တော်တော့မရပါဘူး" လို့ပြောရင် အမေက "မေမေတို့က မခံစားတော့ ဘယ်တော့မှ မခံရဘူး" တမင်ခံစားရအောင်သူများက လုပ်တာသိနေရဲ့သားနဲ့။ ကိုယ့်ကို အပြောခံရပြီဆိုရင် ဟုတ်တာနဲ့၊ မဟုတ်တာ နှစ်မျိုးပဲရှိနိုင်တာ။ အပြောခံရတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုက ဟုတ်နေတာဆိုရင် ဟုတ်နေလို့ ခံစားဘို့မလိုဘူး။ မဟုတ်ရင်လဲ မဟုတ်တာကြီး ပြောနေကြလို့ကို ခံစားဘို့မလိုဘူးတဲ့။
ကိုယ်ကလည်း အဖေ့သွေး အပြည့်နဲ့ အဖေဒီလို စိတ်မောလူမောဖြစ်နေရတာတွေက အမေ မမောလို့၊ အမေအရမ်းအေးချမ်းနေလို့ အဖေခမျာ တစ်ယောက်တည်း နှစ်ယောက်စာမောရလို့ ပင်ပန်းနေရှာတယ်ဆိုပြီး အမြဲတမ်း အဖေ ပူသလိုပူ၊ အဖေမောသလိုမော၊ သူခံစားသလိုခံစား၊ သားအဖနှစ်ယောက် ဖေးဖေးမမ မောခဲ့ကြလေသတည်းပေါ့လေ။
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် ကိုယ်အိမ်ခဏ ပြန်သွားတော့ အဖေက တော်တော်ပြောင်းလဲနေပြီ။ အရင်လို မဟုတ်တော့ဘူး။ ဒေါသတကြီး တုန့်ပြန်တာ၊ ခွင့်မလွှတ်နိုင်တာတွေ လျော့သွားပြီ။ အဖေနဲ့စကားပြောရတာ တမျိုးကြီးပဲ။ အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို မကြေလည်ရင် စကားဝိုင်းတွေမှာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ငေါလောကြီး ဖြစ်နေသလိုလို။ ဆန္ဒတွေစောနေသလိုလို။ အလိုမကျမှုတွေ များနေသလိုလို။ ကိုယ်ကိုကြည့်ပြီး အဖေက "လောကကြီးမှာ ဒီလောက် အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စမျိုး ရှိသလား" တဲ့။ ပြာယာခတ်နေလို့ စိတ်တိုနေလို့။ အမယ်... အဲဒါသူ့ကိုကြည့်ပြီးတတ်ခဲ့တာတွေကြီးပဲ။ သူအဲလိုကြီး မေးလိုက်တော့ စိတ်ဆိုးလိုက်တာ။ သင်းကွဲမျောက်လေး ငါပါဆိုပြီး ၀မ်းပမ်းတနည်း။
အခုနောက်ပိုင်း တစ်နှစ်ကြာလာတော့ ကိုယ့်ကို ထိခိုက်အောင်လုပ်တဲ့သူတွေပဲ များလာလို့လား။ အသိတရားလေးရှိလာလို့လား။ ရှေ့ကပင်တိုင်မြှောက်ပေးနေတဲ့ အဖေပဲမရှိတော့လို့လား၊ ကိုယ်နေတဲ့ အိမ်ရှင်အစ်မက အမြဲ တရားခွေတွေဖွင့်နေလို့လား၊ ဘယ် "လား" ကြောင့်လဲမသိဘူး။ ကိုယ့်စိတ်ကို မထိခိုက်အောင် နေတတ်လာပြီ။ စိတ်ထဲမှာလည်း ဪ... အမေပြောတာမှန်သားပဲ။ "သိ" နေဘို့ပဲလိုတယ်။ သိအောင်ကြိုးစားခြင်းဟာ ညံ့တာမဟုတ်ဘူး။ တော်တာလို့ တွေးမိလာပြီ။ စိတ်ထိခိုက်စရာ တစ်ခုခုဖြစ်ရင် ကိုယ့်စိတ်ကို သူများလာမထိုးနှက်နိုင်အောင်ကာကွယ်တတ်လာပြီ။ အရင်တုန်းကလို သူများတစ်ခုခုခုလုပ်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်စိတ်က ရဲကနဲ ဒေါသထွက်လိုက်၊ ပူလိုက်၊ အေးလိုက် မဖြစ်တော့ဘူး။ စိတ်ထဲမှာ အမေက "အ" တယ်၊ သူများလုပ်သမျှခံတယ်လို့ အဖေ့ပြောခဲ့တာတွေ မှားနေသလိုလို၊ အမေကဘယ်တော့မှ သူများထိုးနှက်လို့မရတာ နည်းနည်းသိလာပြီ။ ကိုယ့်သာသူများထိုးနှက်သမျှ လိုက်ပြီး ဒေါသထွက်၊ တုံ့ပြန်နေလို့ ခံနေရတဲ့ ကောင်ပါလားလို့ ၀ိုးတိုးဝါးတား မြင်လာသလိုလို၊ ရေးတေးတေး သိလာသလိုလို၊ ပြဿနာတစ်ခုခု၊ ဒါမှမဟုတ် စိတ်ဆင်းရဲစရာ တစ်ခုခု ကြုံလာရင် "အမေသာဆိုရင် ဘာပြောမလဲ" လို့သိချင်လာတယ်။ အမေ့ ဖြေရှင်းနည်းကို ကြားချင်သလိုလို။ ရိုးရိုးသားသားဝန်ခံရရင်တော့ အမေ့လို့ နှလုံးသားမျိုးလေး ပိုင်ဆိုင်ချင်လာတယ်။ အဖေ့စကားအတိုင်းဆိုရင်တော့
"အမေလို့ပဲ အ ချင်လာတယ်" ပေါ့လေ။
Posted by See N B Seen | Permalink | 12 comments
အခုတလော ကျောင်းမှာ မြန်မာစကားသံလေးတွေ ဟိုတစ်စ၊ ဒီတစ်စ ကြားနေရပါတယ်။ ၂၀၁၀ မှာ စင်္ကာပူက အိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ် ကျင်းပမယ့် ကလေး အိုလံပစ်ပွဲတော် Youth Olympic Games 2010 (YOG 2010) အတွက် ကိုယ့်ကျောင်းကို မြန်မာနိုင်ငံက ကလေးတွေ ရောက်လာမှာမို့ မြန်မာအငွေ့အသက်ကလေးတွေ သူတို့ကို သင်ပေးနေလို့ပါ။ "မင်္ဂလာပါ"၊ "နေကောင်းလား"၊ "အဘိုကြီးအို ခါးကုန်းကုန်း မသေပါနဲ့ဦး၊ နောက်နှစ်ခါ တန်ဆောင်မုန်း ပွဲကြည့်ပါဦး" သူတို့ဆိုတတ်နေကြပြီ။ ဆရာမလေးတွေလည်း သနပ်ခါးလေးတွေ လိမ်းဘူးကြပြီ။ ကလေးတွေလည်း မြန်မာအကလေးတွေ ကနေကြပြီ။ ကိုယ့်ကိုတွေ့ရင် မင်္ဂလာပါ လို့ပြောတတ်နေကြပြီ။ မေသန်းနုကို လှတယ်တဲ့။ နန္ဒာလှိုင်ကိုတော့ ၀ တယ်နော်တဲ့။ ဒါတွေသိဆို အသက် (၁၂) နှစ် အရွယ်ကလေးတွေ လုပ်ရတဲ့ Project ကလဲကြည့်ပါဦး...
As fellow Singaporeans, you should be excited about the upcoming 2010 Youth Olympic that our country Singapore is playing host to all the youth athletes from over the world. It is indeed an exciting event that we Singaporeans can truly be part of and an excellent opportunity for us to show our hospitality to all our friends from around the world during their stay in our country.
Pupils of our Primary School have the honour of being “buddy” to athletes from Myanmar prior to the start of the YOG 2010. For your Project Work (PW), you are required to design and publish an information booklet detailing some information foraforeign student athlete from Myanmar (your buddy from Myanmar) coming fora1 year stay in Singapore prior to YOG 2010.
You may source for information from the internet or reference materials like books and magazines but you must cite the source of information under references at the end of information booklet.
Part 1: Brief Background of Myanmar & its people
Bried background on Myanmar (eg, historical background, geographical location, climate and population)
You may present the information in the form ofaword document with subheadings. You will also be required to share your findings with your classmates during class oral presentation time.
ကိုယ်လည်း ကလေးတွေနဲ့သူတို့ သိချင်တာလေးတွေ ပြောပြလိုက်၊ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေပြပြီး ရှင်းပြလိုက်နဲ့ စိတ်ချမ်းသာနေပါတယ်။ မြန်မာ့အလှ၊ မြန်မာ့ရှုခင်းကို သူတို့က သဘောတွေကျလို့၊ တချို့ဆရာတွေကလည်း ပင်နီဆူလာမှာ ကြေးအိုးစားကြ၊ မုန့်ဟင်းခါး၊ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ တွေ စားကြ၊ ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကလည်း မြန်မာပြည်အနှံ့ သူသွားခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေ ပြပြီး ကလေးတွေကို ရှင်းပြရ၊ လုံချည်လေးဝတ်ပြရနဲ့။ သူတို့တွေ လိုအပ်သမျှ ကိုယ်လည်း မမောနိုင် မပန်းနိုင်။ တရုတ်၊ ကုလား ကလေးတွေက မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ဆက်ရင် သဘောတွေကျလို့။
ကိုယ့်နိုင်ငံအကြောင်းနေ့တိုင်းပြောနေရလို့လားမသိ၊ အခုတစ်လော အိမ်ကို ပိုလွမ်းမိတယ်။ အိမ်ပြန်ချင်စိတ်တွေလည်း အရင်ကထက် ပိုများနေသလိုလို။ သရက်သီးမစားဘူးတဲ့လူကို အ၀ါရောင်လေး၊ စားရင်ချိုတယ်လို့ ပြောနေရတဲ့အတိုင်း တခါတလေလည်း သူတို့တွေအားလုံး ကိုယ့်နိုင်ငံကို ရောက်ဖူးစေချင်တဲ့ စိတ်တွေဖြစ်လို့။ ကိုယ့်စိတ်တွေကလည်း အချိန်တော်တော်များများ အတိတ်ဆီမှာ၊ ကိုယ်ရောက်ဖူးခဲ့တဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ မြို့တွေဆီမှာ တ၀ဲလည်လည်၊ အထူးသဖြင့် ပုဂံမြေပေါ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်လောက်တုန်းက သူငယ်ချင်းတွေ ကျောင်း Project အတွက် Documentary Video လေးတစ်ခုရိုက်တာကို ပါလေရာ ငါးပိချက် လိုက်လုပ်ဘူးတာလည်း သတိရနေပြန်တယ်။ မနေ့ကလည်း ဒီ Video လေးကို ပြန်ကြည့်ရင်း ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာ တစ်ယောက်တစ်နေရာဆီ ရောက်နေကြတဲ့ သူတို့တွေကို လွမ်းနေမိပါသေးတယ်။ သူတို့ရဲ့ Video Clip လေးကို ကိုယ့် ဘလောဂ့်မှာ လွမ်းလွမ်းနဲ့ အမှတ်တရ တင်ထားပါတယ်။
Posted by See N B Seen | Permalink |6comments
တစ်နေ့က အမေရိကားရောက်ပြီး အမြဲတမ်း အိမ် (မြန်မာပြည်) ပြန်ချင် နေတဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်နဲ့ စကားအကြာကြီး ပြောဖြစ်တယ်။ သူပြောပြမှပဲ အမေရိကားဆိုတာကြီးကို ရောက်ဘို့ ကြိုးစားကြတဲ့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံ၊ ညစ်ပတ်နည်းမျိုးစုံ၊ လိမ်နည်းမျိုးစုံ၊ အခက်အခဲမျိုးစုံ ကြားဖူးတော့တယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ အသက် ၅၀ အရွယ် အမေက အရင်သွားပြီး ယောက်ျားတစ်ယောက် ရအောင်ယူ၊ ယောက်ျားယူလို့ရသွားတဲ့ အခါ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ အရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ သားသမီးတွေဆီအကြောင်းကြားပေ့ါ။ ဒီသားသမီးတွေက "ဟေး... အမေယောက်ျားရပြီကွ US သွားရတော့မယ်" ဆိုပြီး အလွန်ပျော်ရွှင် ၀မ်းမြောက်ကြတယ် ဆိုပဲ။ ဘ၀ဆိုတာ တိုက်ပွဲဆိုပေမယ့် အမေကို ချကျွေးရတဲ့ အထိ ဆိုတော့ တော်တော်လေး ပြင်းထန်တဲ့ တိုက်ပွဲပေပဲ လို့ တွေးရင်း ....
၇ ရက်တရားအားထုတ်ပြီး မဂ်ရတယ်ဆိုတဲ့ တရားစခန်းတစ်ခုမှာ လူတွေကို တရားထိုင်လို့ ၁၅ မိနစ်လောက်ရှိတဲ့ အခါ ခေါင်းကနေတစ်ယောက်က မ၊ ခြေထောက်ကနေ တစ်ယောက် မ၊ ခုံနှစ်ခုံပေါ် ကို အပြားလိုက်တင်၊ အလယ်က ကြမ်းပြင်နဲ့ လွတ်နေတဲ့ ခါးနေရာကို ဓါတ်ပုံတွေရိုက်၊ လေပေါ်မြောက်နေတယ်ပေါ့။ သူတို့ အခေါ် မဂ်ဆိုက်နေတယ်ဆိုလား။ မိဘတွေ မဂ်ဆိုက်ပြီးရင် သားသမီးတွေလည်း မကြာခင် မဂ်ရတယ်ဆိုလား။ လွယ်လိုက်သည်ဖြစ်ခြင်း။ ဟောတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်း အံ့သြ၊ ခုံပေါ်မှာ စန့်စန့်ကြီး မဂ်ဆိုက်နေကြတဲ့ ပြည်ပရောက် ပညာတတ်ဆိုသူများ ကိုလည်း အံ့သြ။ ကိုယ်နားလည်တဲ့ အကြောင်းအရာ မဟုတ်ပေမယ့် ထိုနေ့ကလည်း တော်တော် စိတ်လေမိတယ်။
သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့ Pennisular မှာ ခဏတွေ့တုန်း သူငယ်ချင်းရဲ့ အစ်ကို ၀မ်းကွဲဆိုလား ရောက်လာပြီး ကျွန်တော်တို့ကို စင်္ကာပူဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ တွေပို့ချပါတယ်။ နောက်တော့ တစ်လ ဘယ်လောက်စုထားလဲ။ လစာရဲ့ ဘယ်လောက်ကို စုနိုင်လဲ။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးက ကိုယ်သုံးဖို့ချန်ပြီး အိမ်ကို အကုန်ပို့ရတဲ့ လူတွေဆိုတော့ သူ့မေးခွန်းတွေကို မဖြေနိုင်။ ဒါနဲ့ပဲ Management ဆိုတာက ဘာကွ၊ ညာကွ၊ Theory တွေဘာတွေနဲ့ အမျိုးစုံ နားထောင်ရတော့တယ်။ ကိုယ့်အတွက် ရထားစရိတ်နဲ့ စားဖို့ချန်ပြီး အားလုံးပို့ပါတယ် ဆိုတာ ဘယ်ငွေကြေး Amount ပမာဏကို ထပ်ပြီး Manage လုပ်ရဦးမလဲဆိုတော့ မိဘတွေသုံးနေတဲ့ ပမာဏကို Manage လုပ်ရမယ်။ မိဘတွေကို ငွေကြေး Management သင်ပေးနိုင်မှ ရမယ်တဲ့။ သူဆို ၂၅၀ ပဲပို့လို့ ရသွားပြီတဲ့။ ဗုဒ္ဓေါ။ ကိုယ့်အဖေကို ပိုက်ဆံ ၂၅၀ ပဲ ပို့ပြီး Management လုပ်ပြီး သုံးလို့ပြောရင် ကိုယ့်ကို အဲဒီပိုက်ဆံ ပြန်ပို့ပြီး ပညာသားပါပါ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ဆဲပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ အခြေအနေချင်း မတူလို့ ဘာမှ မငြင်းပဲ ငြိမ်ငြိမ်လေး ကော်ဖီသောက်နေလဲ မရ။ ညီလေး မင်းရော ပြောပါဦး။ ဘယ်လို Manage လုပ်လဲ။ ညီလေး မင်း အစ်ကို ပြောတာ သဘောပေါက်ရဲ့လား။ မင်း ဒီမှာ ဘယ်နှစ် နှစ် ရှိပြီလဲ။ တစ်ပြားမှ မစုမိရင် ညံ့တာပေါ့ကွာ။ ဟုတ်ကဲ့... ညံ့တယ်ပဲ ထားလိုက်ပါတော့ဗျာ။ ထိုနေ့ကလည်း တော်တော်ကြီးကို စိတ်လေမိသည်။
တခြားကျောင်းတစ်ခုမှာ International Friendship Day ကျင်းပနေတုန်း ကိုယ်နဲ့ ကိုယ့် Department Head နဲ့ ခဏ ရောက်နေတာနဲ့ ကြုံကြိုက်လို့ ၀င် ကြည့်မိကြတယ်။ လားလား.... Hall ထဲမှာ Video ပြနေလေရဲ့။ ကြည့်လိုက်တော့ တခြား အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတွေပြီးလို့ မြန်မာပြည် အကြောင်း။ ရွှေရောင်ဝင်းနေတဲ့ ရွှေတိဂုံစေတီပုံမပါ။ ပုဂံမြို့ရဲ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေမပါ၊ ရန်ကုန်မပါ၊ မန္တလေး နန်းမြို့ရိုးမပါ၊ ငပလီ မပါ၊ ဦးသန့်မပါ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မပါ။ တောကြိုအုံကြား၊ နှပ်ချေးတွဲလောင်း၊ ခေါင်းရွက်ဗျက်ထိုး၊ ဆင်းရဲပေ့၊ စုတ်ပြတ်ပေ့ ဆိုတဲ့နေရာတွေ၊ ကျောင်းဝတ်စုံမပါတဲ့ ကလေးငယ် ဘုစုခရုတွေချည်းပဲ။ ပြီးတော့ ဆရာမက "What is the difference between Myanmar and Singapore?" တဲ့။ ကလေးတွေက "Singapore is so rich" တဲ့ပြီးရော။ ကိုယ့်အလုပ်ခွင်မဟုတ်တော့ ဘာမှလုပ်မရ။ ထိုနေ့ကလည်း တော်တော်စိတ်လေသွားသည်။
ရန်ကုန်က အဒေါ်က အားမနာရတဲ့ လူကြုံနဲ့ ပုဇွန်ထုပ် ၂ ပိဿာ ကြော်ပေးလိုက်တယ်တဲ့။ လူကြုံတ၀က်၊ ကိုယ်တ၀က်ပေါ့။ လူကြုံက ဖုန်းဆက်တော့ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လုံး ကိုယ့်အလုပ်ချိန်က မနက် ၅ နာရီ ထသွားပြီး ည ၉ နာရီခွဲမှ ပြန်ရောက်နေလို့ စနေနေ့မှ လာယူပါမယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ဘာပစ္စည်းလဲဆိုတာ သူသိနေတဲ့အတွက် ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ထားမှာပါလေ ဆိုပြီးဘာမှ မပြောမိ။ သွားယူတဲ့နေ့ ကျတော့ ပုပ်စော်နံ နေပြီဖြစ်တဲ့ အထုပ်ကိုပေးတယ်။ ခပ်တည်တည်ပဲ။ သူအနံ့မရဘူးလား မသိ။ ကိုယ့်မှာ ပုဇွန်ထုပ်မျက်နှာနဲ့ အဝေးကြီးသွားယူ၊ ပြီးတော့ သူတို့အိမ်နားက အမှိုက်ပုံးမှာ လွှင့်ပစ်၊ MRT က သန့်စင်ခန်းမှာ လက်ဆေးပြီး အိမ်ပြန်လာ၊ ကြက်ဥကြော်နဲ့ ထမင်းစား။ ထိုနေ့ကလည်း တော်တော် စိတ်လေပါတယ်လေ။
ဒီနိုင်ငံရဲ့ ကျောင်းတွေမှာ E-Learning Week ဆိုတာရှိပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေက ကျောင်းလာစရာ မလိုဘဲ Online Study လုပ်ပြီး Assignment တွေ ဖြေကြရတာ။ တချို့ကျောင်းတွေက တစ်ပတ်လုံး ကျောင်းပိတ်ပြီး တချို့ကျောင်းတွေက ၃ ရက်ပါဘဲ။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေ အားလုံးက ကျောင်းရဲ့ Learning Portal မှာ exercise တွေ၊ Quiz တွေ၊ Assignment တွေကို Level လိုက် Assign လုပ်ထားတာပါ။ ကျောင်းသားတွေက အိမ်ကနေ ဇိမ်နဲ့ လေ့လာ သင်ကြားရုံပါဘဲ။ ဒါနဲ့ပဲ School Portal မှာ Starhub Internet သုံးထားရင် နှေးပါမယ်။ Singtel သုံးရင် မြန်ပါမယ်လို့လဲ အတိအလင်း ကြေငြာထားပါတယ်။ ကလေးမိဘတစ်ယောက်က ဖုန်းဆက်ပါတယ်။ သူ့သားအနေနဲ့ ဘာ Lesson တွေကိုမှ မမြင်ရပါဘူးတဲ့။ ဒါနဲ့ပဲ ဘယ် ISP သုံးလဲဆိုတော့ Starhub တဲ့။ ဒါဆို နည်းနည်းတော့ နှေးပါမယ်။ စောင့်ရပါမယ်ဆိုတော့ တော်တော် စိတ်ဆိုးပါတယ်။ ဒါဆို နင်တို့ သဘောက SingTel ပြောင်းသုံးခိုင်းတာလား။ ငါ့အချိန်ကို ဘာလို့ waste ဖြစ်အောင် လုပ်ရတာလဲ။ Starhub ကို complian လုပ်ပေးပါ။ ငါတို့က စောင့်လဲမစောင့်နိုင်ဘူး။ လိုင်းလဲမပြောင်းနိုင်ဘူး။ ကျောင်းက စီစဉ်ပါတဲ့။ ဖုန်းချသွားလိုက်တာ ခွပ်ကနဲပဲ။ ဪ... စိတ်လေမိတယ်ဆိုတာထက် ပိုပါတယ်လေ။
အလုပ်မှာရှိတဲ့ Department တစ်ခုက Application တစ်ခုလိုချင်လို့ IT Dept နဲ့ အစည်းအဝေးလုပ်ပါတယ်။ Develop လုပ်ရမယ့်ရက်၊ Testing လုပ်ရမှာနဲ့ ၁ လ ကြာပါမယ် ပြောတော့ ၁ ပတ်နဲ့ ပြီးအောင်လုပ်ပေးဘို့ ပြန်ပြောပါတယ်။ နေ့ရော၊ ညရော ဘာမှမလုပ်ဘဲ ဒီတစ်ခုပဲ ၀ိုင်းလုပ်ရင်တောင် မပြီးနိုင်တဲ့ အခြေအနေမို့ မရနိုင်တဲ့ အကြောင်း ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှင်းပြရပါတယ်။ အားလုံးပြီးသွားတော့ အဲဒီ ဌာနရဲ့ ဒုတိယ အကြီးဆုံးအမျိုးသမီးက အချိန်ကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချတတ်ရင် ဘယ်လို အကျိူးရှိတဲ့ အကြောင်း ရုတ်တရက် ကြီးဆွေးနွေးပါတယ်။ သူမက သူအမြဲတမ်း အနက်ရောင် ပဲ ၀တ်တာ သတိထားမိပါသလားတဲ့။ သူပြောမှပဲ ကိုယ်တို့တွေအားလုံး ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြပြီး ဟုတ်သားပဲပေါ့။ သူမမှာ ကလေး ၃ ယောက်နဲ့ အလုပ်ကြိုးစားရတာ၊ အ၀တ်အစား အရောင် ကိုက်၊မကိုက် ဘာဝယ်ရရင် ကောင်းမလဲစဉ်းစားဘို့ အချိန် မပေးနိုင်ပါတဲ့။ အမြဲတမ်း အနက်ရောင်ပဲ ၀တ်ဘို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ဘာဝယ်ဝယ် အနက်ဆိုတော့ ထွေထွေထူးထူး စိတ်ရှုပ်စရာမလိုတဲ့ အတွက် အချိန်တွေကို လုပ်ငန်းခွင်မှာ အသုံးချနိုင်ပါတယ်တဲ့။ သူ့သီအိုရီက သူ့အတွက်တော့ မှန်ကောင်းမှန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တို့တွေက ကလေး ၃ ယောက် မွေးထားတာလဲမဟုတ်၊ အမြဲတမ်း မည်းမည်းကြီး ၀တ်နေဘို့ကလည်း အဆင်မပြေတဲ့ အကြောင်း တော်တော်လေး ပြန်ရှင်း ရပါတယ်။ စိတ်လေသောနေ့များပါလေ...။
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က 1818 ကဒ် လက်ကျန် သုံးခုကို ၁ ကဒ်ထဲပေါင်းထည့်၊ ပြီးတော့ ၂ ကဒ်ကို သေသေချာချာ အိမ်အပြင်ဘက်က အမှိုက်ပုံးထဲ လွှတ်ပစ်လိုက်တယ်။ နောက် ၂ ရက်နေတော့ ရုံးချိန်မှာ အမေက Miss Call လုပ်ထားတာတွေတော့ Ph ကဒ် က နံပါတ်တွေကို အမြန်နိုပ်လိုက်ပါတယ်။ လေလှိုင်းထဲက အမျိုးသမီးက တစ်စုံတစ်ခု ပြောပါတယ်။ IDD နာရီဝက် လောက် အမေ့ဆီကို ပြန်ခေါ်လိုက်ရတယ်။ စိတ်အလေဆုံး နေ့ပါဘဲဗျာ။
Posted by See N B Seen | Permalink | 20 comments